Fitsidihana An’i Indonezia | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Pangasinan Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Fitsidihana An’i Indonezia
FITAMBARANA nosy 17 000 eo ho eo i Indonezia. Miavaka ny mponina eto satria tena sariaka, manam-paharetana, mahalala fomba, ary tia mandray vahiny.
Vary sy laoka ary voankazo no sakafon’izy ireo. Asiany zavamanitra mampahatsiro sakafo ny laoka matetika. Eo ambony tsihy ny mpianakavy any amin’ny faritra sasany no misakafo, ary mihinam-bary amin’ny tanana ry zareo. Maro ny Indonezianina milaza fa matsiro kokoa ny sakafo hanina amin’ny tanana.
Be mpitia ny voankazo durione (karazana ampalibe kely) na dia mahery fofona aza. Malemilemy mantsy ny nofony sady matsiro be
Tia zava-kanto sy dihy ary mozika ny Indonezianina. Mampiavaka an-dry zareo ny zavamaneno antsoina hoe anklong. Volotsangana maromaro alahatra sy ahantona amin’ny tsivalan-kazo izy io, ary mamoaka feo isan-karazany rehefa ahetsiketsika. Tsy maintsy mahay manetsiketsika ny azy ara-potoana ny mpilalao maromaro mba hamoahana mozika mahafinaritra.
Io no lehibe indrindra amin’ny karazana rajako mipetraka eny ambony hazo. Fahita any amin’ny ala tropikalin’i Sumatra sy Bornéo izy ireo. Mety hahatratra 90 kilao ny lahy ary mety hahatratra roa metatra sy sasany latsaka kely ny halavan’ny tanany roa raha atambatra
Nanjaka teto Indonezia ny Hindoisma sy ny Bodisma, talohan’ny taonjato faha-15. Nahazo vahana indray ny Silamo taloha kelin’ny taonjato faha-16. Tonga nitady zavamanitra mampahatsiro sakafo ny Eoropeanina tamin’ny taonjato faha-16, ary nitondra ny Fivavahana Kristianina.
Ny asa fampianarana Baiboly no ahafantarana ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Nitory teto izy ireo nanomboka tamin’ny 1931. Misy Vavolombelona 22 000 mahery izao eto, ary miezaka mitory amin’ny marenina izy ireo. Nanao fivoriana manokana tamin’ny tenin’ny tanana ny Vavolombelon’i Jehovah, vao haingana, mba hahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy Kristy. Nisy 500 mahery ny mpanatrika.
Iza amin’ireto no misy any Indonezia?
karazana zavamaniry 20 000
karazana biby mampinono betsaka indrindra eto an-tany
voninkazo lehibe indrindra eto an-tany
voninkazo avo indrindra eto an-tany
Valiny: Izy efatra. Mahatratra 91 santimetatra ny savaivon’ny voninkazo lehibe indrindra eto an-tany. Mahatratra telo metatra ny voninkazo avo indrindra.
Mponina: 237 600 000
Zavatra aondrany: Menaka palmie, fingotra, solitany, ary arintany
Fiteny: Bahasa indonezia, sy fitenim-paritra an-jatony
Fivavahana: Silamo (88 isan-jaton’ny mponina)
Avoaka amin’ny fiteny 98 izao ny Mifohaza! ary anisan’izany ny teny bahasa indonezia